आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है ! – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:१४ Basanta Khanal	0 Comments	AAma, Mother
एउटा गरिब किसान र उसकी बूढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे । अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरू-संग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र शान्त र खुसी थिए । उनीहरू बस्ने साइनिंग प्रान्तमा एउटा निरंकुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो जो वृद्ध मानिस`हरूको स्वास्थ्यव`स्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो । यसले गर्दा एकदिन उसले एउटा कठो|र घोषणा गर्यो । उसले पूरै प्रान्तका बूढाबूढी`हरूलाई तुरुन्तै मारि`दिनू भन्ने व्यहोराको आ`देश दियो । वास्त`वमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बूढा-बूढीहरूलाई म`र्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्यनै थियो । गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तनमनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठो`र हुकुम सुनेर उसको मन वे`दनाले भरियो । तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दै`नथ्यो । त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमा`लाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृ`त्यु दिनको लागि तयारी गर्यो । सूर्यास्तमा, जब उसको दैनिक कार्य सकियो तब उसले केहि अन्न`सहित आफ्नी असहाय आमालाई बुइमा बोक्यो र पहाडको चुचुरो`तर्फको दर्द`नाक यात्रा सुरु गर्यो । बाटो निकै लामो र अप्ठ्यारो खालको थियो । अनेकौ साँघुरा बाटा`हरूले गर्दा धेरै ठाउँमा ऊ अल्म-लिन पुग्यो पुग्यो र कति`पय ठाउँमा बाटो बिरायो पनि । तर उसले त्यसको वास्ता गरेन ।
जुन-सुकै बाटो गए पनि उसलाई केही फरक पर्दैनथ्यो । उकालोमा ऊ अन्धा`धुन्ध अगाडि बढिरह्यो । उक्त पहाडको शिखरमा नाङ्गो भाग थियो जहाँ छोरा-छोरीले आफ्ना आमा-बाबुलाई लगेर एक्लै छाडि`दिन्थे र ऊ त्यतैतर्फ लागिरहेको थियो । बूढी आमाको आँखा त्यति धमिला त थिएनन् तर छोराले अल|मलमा एकपछि अर्को बाटो परिवर्तन गर्दै अघि बढेको देखेर उनको प्रेमिल हृदय अत्यन्तै अत्ता`लिन थाल्यो । उनको छोरा`लाई पहाडका बाटा|हरूबारे राम्रो ज्ञान थिएन र उसलाई फर्किने बेलामा ख`तरा हुनसक्छ भन्ने चिन्ताले उनले अगाडि बढ्दै गर्दा आफ्नो हातले भ्याउने ठाउँको रुख`विरुवाका हाँगा`विंगाहरू निमो`ठिन् र केहि पाइला क`ट्ने`बित्तिकै बाटोमा खसाउँदै गइन् । यसले गर्दा उनीहरूले छोडेर गएको साँघुरो बाटोको ठाउँ-ठाउँमा हाँगा`विंगाहरूको थुप्रो देख्न सकिन्थ्यो । अन्त्यमा उनीहरू पहाडको टुप्पोमा पुगे । थकि`त र निराश किसानले विस्तारै आफ्नी आमा-लाई भुइँमा बिसायो र आमा-प्रतिको आफ्नो अन्तिम कर्तव्य पूरा गर्नेको लागि उसले एउटा आराम-दायी ठाउँ खोज्यो ।भुइँमा झरेका सल्लाका पातहरू-लाई जम्मा गर्दै उसले विछ्यायो र आफ्नी बूढी आमा-लाई उठाएर त्यसमाथि राख्यो । त्यसपछि आँ’शु भरिएका आँखा र दुखि`रहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट विदा माग्यो ।
छोरालाई आफ्नो अन्तिम आदेश दिनेबेलामा निस्वार्थ मायाले भरि-पूर्ण आमाको आवाज काँपि-रहेको थियो । ‘तिम्रा आँखा-हरू कहिल्यै पनि कम`जोर नहुन् मेरो छोरा!’, उनले भनिन् । ‘पहाडको बाटो ख|तरा नै खत`राले भरिपूर्ण छ । साव`धानीपूर्वक हेर्दै हिंड र जुन बाटोमा रुखविरुवाका हाँगाविंगाहरू थुप्रिएका छन् त्यहि बाटोलाई पछ्याउँदै जाऊ । तिनीहरूले तिमीलाई घरसम्म पुर्याउने छन् । ’छोराका भाव`विभोर आँखाहरूले पछाडि बाटोतर्फ हेरे र त्यसपछि फुटेका र चाउरी परेका बूढी आमाको कर्मशील हातहरू`लाई हेरे । भित्रभित्रै उसको मन छिया`छिया भयो र भुइँतिर शिर निहुर्याउँदै उसले विला`प गर्यो-‘ए मेरी आदरणीय आमा, हजुरको ममता देखेर मेरो मुटु नै टुक्रा`टुक्रा हुन्छ ! म हजुरलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिन । हामी संगै घर|सम्मको बाटो पत्ता लगाउनेछौं र म`र्नु|परे बरु संगै मर्नेछौं । उसले फेरी एकपल्ट आफ्नो भारीलाई बोक्यो(कति हलुङ्गो लाग्यो उसलाई आफ्नी आमा!) र जूनेली प्रकाशमा आमाले भुइँमा झारेका हाँगा|विंगालाई पछ्याउँदै तल उपत्यकामा रहेको आफ्नो सानो झुपडी`तर्फ लाग्यो । उसको भान्छा|कोठाको कुनामा खाने|कुराहरू भण्डारण गर्नको लागि एउटा गोप्य भण्डार थियो जो हत्त`पत्त कसैको नजरमा पर्दैनथ्यो । उसले आफ्नी प्यारी आमा`लाई त्यहीं लुकायो । उसले आमा`लाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू लागि`दिन्थ्यो र आफूले लुकाएको कुरा कसैले पत्तो लगाउला भनेर सतर्कता अपनाउँथ्यो । समय बित्दै गयो र उसले सुर`क्षीत महसुस गर्दै गयो । तर त्यतिबेला नै राज्यपालले आफ्नो शक्ति दर्शाउने हेतुले फेरी अर्को अविवेकी आदेश दियो । उसको माग थियो कि उसका सबै रैतीले खरानीको डोरी बनाएर उसलाई भेटी चढाउनु`पर्ने थियो । ड`र र त्रा`सले गर्दा सारा प्रान्त नै थर`थर काँप्यो ।
आज्ञा बाध्यात्म`कारी थियो र पूरै साइनिंग प्रान्तमा कसले पो खरानीको डोरी बनाउन सक्थ्यो र? अत्तालिएको किसानले एक रात आफ्नी आमालाई राज्य`पालको त्यो अचम्म|लाग्दो आदे`शबारे बतायो । उनले पर्ख! ‘म यसबारे सोच्नेछु । म सोच्नेछु भनिन् । अर्को दिन उनले छोरा`लाई खरानीको डोरी बनाउने उपाय बताइन् । उनले भनिन् परालको डोरी बाट । ‘त्यसपछि चेप्टा ढुंगाहरूमा राखेर त्यसलाई सिधा पार र एउटा हावा नचलेको रात पारेर आ|गो सल्काऊ | किसानले मान्छेहरूलाई भेला पारेर आमाले भनेजस्तै गर्यो र आ`गो निभेपछि ढुंगामा खरानीको डोरी बन्यो । राज्यपाल किसानको बुद्धि देखेर प्रशन्न भयो र सबैको अगाडि निकै प्रशंसा गर्यो । र उसले यो जान्न खोज्यो कि कहाँबाट उक्त किसानले त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको थियो । किसानले सोच्यो- अब अन्ततः मैले सबै सत्य भन्नै पर्छ र उसले आफ्नो सबै कथा खोल्यो । राज्यपालले सविस्तार सुन्यो र त्यसपछि मौनधारण गर्दै गहिरो सोचमा डुब्यो । धेरैबेरपछि उसले आफ्नो शिर उठायो र गम्भी|र मुद्रामा भन्यो – हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ शायद मैले केश फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भनाइलाई बिर्सेछु । यति भनेपछि उसले त्यतिखेर नै आफ्नो कठो`र नियमलाई अन्त्य गर्यो र वृद्धवृद्धाहरूलाई मा`र्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । कथा मन परेमा शेय`र गरेर आमाको सम्मान गरौं कथा – जापानी कथा लेखक मात्सुओ बाशो ( अनुवादक अनुप जोशी ) – (साङ्केतिक फिचर तस्बिर)
← बोनस शेयर बन्धक बनाउँदै कम्पनीहरु :साधारण सभाले पारित गरेको ३ महीना बित्दा पनि सूचीकृत भएन
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २४ जेठ २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं →
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:४६ Basanta Khanal	0
२८ माघ २०७७, बुधबार २३:०२ Basanta Khanal	0